आमा, पत्नी र दुई छोरा सहित युवकले यो संसारबाट विश्राम लिए, कारण यस्तो छ ! – Khabar Chautari
बुधबार १३ आश्विन २०७८
एउटै घरका पाँचले कर्णालीमा हाम फालेर आत्महत्या किन गरे ? यस्तो छ प्रारम्भिक अनुसन्धान
सबैभन्दा कन्जुस हुन्छन् यी राशिका मानिस , तपाईको कुन राशि ?
घट्यो डरलाग्दो रहस्यमय घटना : कान्छि श्रीमती भेट्न भन्दै निस्केका हेमराजको श’ व १७ दिनपछि जंगलमा स’डेको अवस्थामा भेटियो, छोराको शव देखेर आमा वेहोस् (भिडियो हेर्नुस्)
सम्पत्तीका लागि दिदी भिनाजुले ४० लाख दिएर भाईको परिवार नै सिध्याउने योजना, यसरी खुल्यो रहस्य (भिडियो)
बेबारिसे लाश जलाएर बिश्वमा नाम चिनाउन सफल सपनालाई यौ’न दु’व्र्य’वहार गरेर मा’र्नेसम्मको ध’म्की दिएको भन्दै सपनाको बाउआमा रुदै आए मिडियामा (भिडियो सहित)
छुट्टिन नसकेपछि राहुलकी आमाले राहुल र स्मिताको पुनः गराईदीईन बिवाह, आमाले खेलिन ठुलो भूमिका (भिडियो)
आमा, पत्नी र दुई छोरा सहित युवकले यो संसारबाट विश्राम लिए, कारण यस्तो छ !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १३, २०७७ समय: १९:३३:४९
काठमाडौं । आजको दुनियाँमा गरिबी भन्दा अर्को कुनै ठुलो संकट मान्छेहरु देख्दैनन् । नेताहरुले पनि हरेक पटक गरिबी निवारण गर्ने बाचा गर्ने गरेका छन् । तर गरिबहरुले आफ्नो कष्टकर जीवन अहिले पनि बाँच्नु परिरहेको छ ।
विश्वका धेरै देशहरुमा गरिबी एक आम समस्या भैसकेको छ । गरिबलाई समाजमा बाँच्न पनि धेरै गाह्रो छ । समय–समयमा आर्थिक बोझ र सामाजिक रुपमा हुने अ’पमान स’हन न’सकेर जी’वनबाट वि’श्राम लिएका घटनाहरु पनि आइरहेका हुन्छन् । यस्तै एक सबैको मन रुवाउने घटना अहिले भारतबाट आएको छ ।
सोमबार राति रायपुरमा एक जना युवकले आफ्नी आमा, पत्नी र दुई छो’राको जी’वन स’माप्त पा’रेपछि आफु पनि यो सं’सारबाट वि’दा भएका छन् । यो घटना अभनपुरको केन्द्री गाउँको हो । छिमेकीहरूले मंगलबार बिहान घटनाबारे जानकारी दिएका हुन् । हालसम्म यस घटनाको कारण थाहा हुन सकेको छैन । गाउँलेहरूले दिएको जानकारी अनुसार परिवारभित्र नै बढ्दै गएको रोगका कारण उनीहरु चिन्तित थिए । छत्तीसगढका गृहमन्त्री ताम्रध्वज साहूले उक्त घटनाको छानबिनको आदेश दिएका छन् ।
रायपुरका एसएसपी अजय यादवले केन्द्री गाउँमा बस्ने कमलेश साहूले आफ्नी श्रीमती, आमा र दुई छो’राको जी’वन स’माप्त पा’रेर आफु पनि यो सं’सारबाट स’दाका लागि विदा भएको घटनाको पुष्टि गरेका छन् । गाउँलेहरूको सूचनामा प्रहरीले कमलेशको लाश फेला पारेको थियो । उसकी आमा, पत्नी र दुवै बच्चाहरूको लाश भु’ईंमा रहेको थियो ।
एसएसपीका अनुसार गाउँका मान्छेहरुले प्रहरीलाई परिवारका सदस्यहरू कुनै बिरामीले व्याकुल भएको भनेका छन् । यो घटना हुनुको पछाडि यो विषय पनि कारणका रुपमा रहेको हुनसक्ने जनाइएको छ । यद्यपि प्रहरी कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
राज्यका गृहमन्त्री साहूले यस घटनाको छानबिनको आदेश दिदैँ भनेका छन, ‘एकै परिवारका ५ जना व्यक्तिको मृत्यु हुनु ठूलो कुरा हो । मैले घटनाको सब भन्दा चाँडो पत्ता लगाउन भनेंको छु । छिमेकीका अनुसार उनीहरुमा रोग लागेको थियो । आमा दमको रोगी थिइन् । छोरो मुटुको रोगी थिए । उपचार गर्न त खानका लागि समेत उनीहरुलाई खर्च धान्न धौ धौ थियो । घटनाको कारण यही पो होकी ।
३८९ पटक हेरिएको
१.	बाउले मकै बारीमा, छोराले घरको चोटामा एउटै महिलालाई गर्दा रहेछन् यस्तो, अब आमा भन्ने कि श्रीमती ? (भिडियोसहित)
२.	दिउँसोका लागि बच्चा जन्माउन रोक्ने औषधि र साधन ६ गुणा बढी किन्नुको कारण खुल्दा हैरान !
३.	यि हुन आफ्नी कलिलो उमेरकी बुहारीसँग लगातार ४ बर्षसम्म स’म्बन्ध राख्ने ससुरा
४.	बिहे भएकाे २७ महिनामै यस्ताे भयाे, ‘मेरी श्रीमती अर्कैसंग लागिन्’-कतारबाट श्रीमान रुदै लाईभमा।
५.	श्रीमानसँग नै मिलेर विदेशमा कमाएको ८ लाख तरुनीले खाइदिएपछि, ना# ङ्गो फोटाहरु लिएर युवा मिडियामा ।
६.	यी चार राशि जसले निकै धन कमाउँनेछन्, कतै तपाइँ पर्नु भयो कि ?
७.	राती सुतेको बेलामा खुट्टा बाउँडिन्छ ? यी कार्य गर्नुहोस
९.	कति मिठाे कथा: भिनाजुसंग डिभाेर्स भएपछि दिदि बनिन् कराेडपति, हेर्नुस् कसरी?